Martida wax lagu qoro - Waxaad ku sameyneysaa si qaldan | Martech Zone
Hal mar, backlinks ayaa xukumay adduunka hagaajinta mashiinka raadinta. Markii tayada barta lagu cabiray PageRank, backlinks waxay bixiyeen codad badan oo la raadinayay oo keenay cabirkan. Laakiin markii algorithm-ka Google uu qaan gaadhay, darajooyinka degelku kuma sii tiirsanaan karaan oo keliya tirada xiriiriyeyaasha dib u tilmaamaya. Tayada goobta martigalinaysa isku xidhkaas waxay bilaabeen inay qaadaan culeys ka badan tirada faro badan ee xiriir ee degel heli karto.
Tani waxay dhalisay ku dhaqanka qorista qoraalada baloogyada ee bogagga kale. Macaamilku wuxuu ahaa mid aasaasi ah; waxaad siisaa shabakada waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyaguna waxay ku siinayaan backlink. Hase yeeshe, sida farsamooyinka kale ee isku xirka dhismaha, xadgudubku wuxuu ku faafaa barta internetka ee martida. Websaydhada waxaa loo sameeyay sabab kale oo aan ahayn martigelinta qoraalada martida, boggaga dadka waxaa lagu soo oogay inay dhigaan qoraalkooda, dadka qora qoraalada martida waxay soo saareen qashin aan qiimo lahayn, maqaallada wareejinta ayaa caadi noqotay. Waxay ahayd waqti uun kahor Google jabsaday mar labaad oo waxaan bilaabay inuu hubiyo farsamadan dhisida iskuxiraha.
Markii cusbooneysiinta Penguin la sii daayay, xeelado dhajinta martida hadheysan ayaa hore iyo bartamaha la keenay; dad badan ayaa tan u qaatay inay macnaheedu tahay in qorista martida ee martigalintu aysan ahayn istiraatiijiyad wax ku ool ah maaddaama goobo badan lagu ciqaabayo sababo la xiriira dhaqankooda baloogyada martida loo yahay.
Natiija ahaan, ganacsiyada qaarkood waxay ka quusteen dhajinta martida gebi ahaanba, sababtoo ah waxay ku hoosjireen aragtida ah in xiriidhadu aysan muhiim ahayn. Hase yeeshe, in kasta oo dhammaan waxyaabaha xun ee aad ka maqli karto saameynta ay backlinks ku leeyihiin dadaalkaaga SEO, weli wey muhiim yihiin. Dhab ahaantii, wax badan ayey leeyihiin. Sida laga soo xigtay Searchmetrics 2013 Calaamadaha Saami,
“Backlinks-ku waxay sii ahaanayaan mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee SEO. Marka la eego, wax yar ayaa isbedelay sannadihii la soo dhaafay: bogagga leh backlinks badan ayaa si fudud u darajo wanaagsan. ”
Runtu waxay tahay in baloog garaynta martida ay wali tahay istiraatiijiyad suuq geyn muhiim ah oo wax ku ool ah, laakiin kaliya marka si sax ah loo sameeyo.
Nasiib darrose, dadku wali waxay ku adag yihiin inay fahmaan habka saxda ah ee looga hadlayo dhajinta martida. In kasta oo hagitaanno badan oo bixiya naqshad lagu guuleysto, haddana weli si fiican uma helaan. Khaladaad isku mid ah ayay sameeyaan marar badan. Kuwa ka faa'iideysanaya wax badan oo aan tusaalooyin ahayn, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah siyaabaha khaldan ee dadku u maraan barbarashada martida.
Goynta Geesaha Tayada
Khaladka ugu badan ee aan arko ayaa ah in tayada waxyaabaha ay dadku u soo gudbiyaan qoraalladooda martida aysan ku filnayn.
Meel kasta oo aad dhigeyso mawduucaaga, magacaaga ayaa ku yaal. Waxay u taagan tahay astaantaada, sidaa darteed haddii aad rabto nooc summad leh, waxa aad ka kooban tahay waxay u baahan yihiin inay noqdaan tusaale. Dib markii ay dadka oo dhami u daryeeleen waxay ahayd gadaal gadaal, nuxurka loogu talagalay qoraalada martida waxaa soo jiiday milkiileyaal ka kooban waxyaalo micno darro ku dheehan tahay si looga fogaado ciqaabta soo noqnoqashada.
Markii waxyaabaha noocaan ah lagu daabacay goob yar oo soo-gaadhis yar, waxay fursad yar u heshay inay dhaawacdo sumcadda sumcaddaada. Maalmahan, qoraalada martidaadu waa inay siyaabo kala duwan adiga kuugu shaqeeyaan. Ku dhejinta fariimaha martidaada nooca saxda ah ee goobaha waxay ka dhigan tahay in dadku arki doonaan iyaga oo fikrad kaa sameyn doona adiga oo ku saleynaya waxa ay akhriyaan.
Doorashada Goobaha Khaldan
Kahor Penguin, ku dhaqanka barta martida ee martida loo ahaa diiradda ma saarin inta badan tayada goobta martigelinta. Maqaallada waxaa loo gudbiyay beeraha wax laga qoro iyo tilmaamaha maqaalka maxaa yeelay waxa kaliya ee muhiimadu ahayd backlink-ka. Post Penguin, boggaga sidan sameeyay intabadan waxay is arkeen in la ciqaabayo. Kaliya maahan inuu kudhaco natiijooyinka raadinta dhaawac, laakiin sidoo kale maskaxdan ayaa ahayd aragti gaaban. Baloogyada martida ayaa albaabka u furaya fursado kale oo badan oo dhaafay gadaal.
Marka boostadaada martida ah lagu daabaco goob si wanaagsan looga ixtiraamo warshadahaaga oo ay leedahay beel weyn boostadaada martida ah waxay kuu sameysaa waxyaabo dhowr ah oo dheeraad ah:
Waxay sare u qaadaysaa wacyiga rajada iman kara
Waxay kuu dejineysaa inaad tahay khabiir ku takhasusay warshadaha
Waxay ku dhistaa kalsoonida summadaada
Goob leh bulsho ballaadhan oo firfircoon ayaa sidoo kale leh ballaarin ballaaran. Akhristayaashu waxay u badan tahay inay wadaagaan waxyaabo wanaagsan, waxayna u badan tahay inay booqdaan bartaada, kordhinta taraafikada gudbinta tayada leh.
Cabirida tayada barta waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la hubinayo dhowr astaamood oo muhiim ah. Haddii ujeeddadaadu tahay inaad ku dhejiso goob leh taraafiko badan, degel leh darajo Alexa oo hooseysa ayaa noqon doonta bartilmaameed wanaagsan. Haddii aad rabto degel ka gudbi doonta qiime badan oo SEO ah xiriiriyeyaasha, markaa waxaad dooneysaa inaad raadiso goobo leh Hay'ad Sare oo Sare. Fikrad ahaan, waxaad ubaahantahay inaad sameyso dadaal aad ku gareyso goobo kala duwan. Inbadan oo ku saabsan taas qaybta xigta.
Kala Duwanaansho La'aanta
Mid ka mid ah dhibaatooyinka backlinks waa in helitaankooda si otomaatig ah loo sameeyo. Adoo adeegsanaya soo gudbinta tusaha, ka faallooda boggaga kale iyo xitaa soo dirista martida. Si aad u hesho goobo aan si dabiici ah u dhisin backlinks, makiinadaha raadinta waxay raadiyaan tilmaamayaal sida:
Qoraal barroosinka oo aad loo habeeyay
Tirada aan dheelitirka lahayn ee dofollow marka la barbar dhigo xiriiriyeyaasha nofollow
Tiro badan oo xiriirro tayo hoose leh
Ku dhajinta martida waxay awood kuu siineysaa inaad dhisto xiriir xiriiriye oo sifiican uxiran. Baloogyada qaarkood ayaa kuu oggolaanaya inaad ku darto xiriirinta jirka boostadaada, halka kuwa kale ay u baahan karaan inaad dhigto xiriiriyeyaal kaliya qoraagaaga qoraha. Qaab kale oo loogu kala duwanaan karo xiriiriyeyaasha waa in la kala beddelo qoraalka barroosinka. Adeegsiga ereyada iyo weedho aan si fudud loo aqoonsan karin isla markaana faa'iido u leh keywords keywords waxay ka dhigeysaa waxyaabo muuqaal dabiici ah.
Istaraatiijiyad kale ayaa ah inaad ku martiso boostada boggaga aan ku jirin warshadahaaga ama niche, laakiin xoogaa isku mid ah. Tusaale ahaan, haddii aad tahay shirkad caymis, waxaad ku qori kartaa qoraallo marti ah bogagga caafimaadka iyo jimicsiga ee la xiriira sida firfircoonaanta iyo caafimaadku u yarayn karo kharashyada caymiska nolosha. Bog iibiya kumbuyuutarrada ayaa gaari kara barta internetka ee diiradda saaraya amniga kombuyuutarka. Ku darista waraaqaha martida ee warshadaha isweydaarsiga faylalkaaga kaliya maahan inay gacan ka geysato kala duwanaanta xiriiriyeyaashaada, laakiin waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad u bandhigto astaantaada dhagaystayaasha cusub.
Ku dhajinta martida kaliya ma caawinayso boggaaga; waxay kaa caawin kartaa inaad la yeelatid xiriirro adag dadka kale ee ka tirsan warshadahaaga. Akhriso baloogyada aad rabto inaad lashaqeyso una dir milkiilayaasha hordhac adag iyo codsashada martida martida.
U sheeg waxaad jeclaan lahayd inaad qorto iyo sida aad khabiir ugu tahay mowduucaas. Inta badan dhammaantood, ha ka baqin inaad u sheegto sababta aad u rabto inaad wax ugu qorto degelkooda. Daacad ahaanshuhu wuxuu u oggolaanayaa inay ogaadaan inaadan isku deyin inaad ciyaarta ka dhigto nidaamka, laakiin halkii aad ka dhisi lahayd ganacsigaaga adoo si togan wax ugu biirinaya tooda.
Tags: abuurista waxyaabobarta casriga ahmartida blogging dhaqanka ugu fiicanWarbixinta Penguin
Ganacsigaagu ma wuxuu u dhexeeyaa Macaamilka iyo Waxay Rabaan?
Waa maxay gabal aan caadi ahayn. Marti gelinta martida waxay noqon kartaa hab fantastik ah oo lagu kordhiyo fikirkaaga hoggaamineed gudahaaga… haddii aad taqaanno sida saxda ah ee loo sameeyo. Waad ku mahadsan tahay talooyinka!
Caqli badan. Blog-kayagu wuxuu si joogto ah u aqbalaa qoraallada martida, laakiin waxaan ku adkeyneynaa tayada iyo isku xirnaanta dhabarka. Waxaan rajeyneynaa, u fiirsashada tayada ayaa naga hor istaagi doonta inaan waligeen u ekaano wax kale oo aan aheyn waxaan nahay: baloog isku dayaya inuu qiimo u siiyo akhristayaashayada.
Raadi kooxda niche aad rabto inaad u tagto ka dibna raadso goobaha saxda ah. Talooyin fiican. Waxaan u maleynayaa in dadku ay dhadhan xun u yeelan karaan afkooda hadda maalmo ku saabsan qorista martida maxaa yeelay waxaad haysataa tiro badan oo dad ah oo kaliya oo doonaya inay helaan meel marti ah si ay u buuxiyaan boggooda oo ay ka buuxaan xiriiriyeyaal. Dadku waxay rabaan macluumaad aad u fiican, ee maahan xiriiriyeyaasha, haddii aad siiso waxyaabo fiican dadka waxaa laga yaabaa inay rabaan inay adiga ku raadsadaan.
Ogolaada! Waxaan la halganeynaa kuwa dabada ka riixaya oo isku dayaya inay ku soo dhex galaan barteena markasta. Waxaan bilownay inaan ka fureyno dhammaan xiriiriyeyaasha qoraallada - taasi way na caawinaysaa.
Runtii waqti wacan baan ku qaatay inaan aqriyo qoraalkaaga Larry… Waad ku mahadsantahay wadaagistaada!
Tilmaamo waaweyn Larry. Waxaan sidoo kale hubiyaa inaan ugu yaraan haysto darsin qoraal ah oo ku saabsan bloggeyga ka hor intaanan bilaabin qorista martida si xoog leh. Wax kasta oo taas ka yar waxay la macno tahay in akhristayaasha aan ka soo jiito baloogyada kale ay baxayaan iyagoo niyad jabsan lagana yaabo inaanay mar dambe soo noqon.
Talo yaab leh! Waxaan inta badan la yaabnaa inta shirkadood ee kor u qaada boggooda sida dadka waalan… mana jirto wax macluumaad ah ama fursad ah oo ay kula macaamilaan shirkadda marka ay dadka halkaa tagayaan!